Iindaba - Uyikhetha njani iIyelashes zobuxoki eziLungele ukuJongwa kwamehlo akho? | Ubuhle beKalocils
Abantu abaninzi badidekile malunga nendlela yokwazi iimilo zabo zamehlo kunye nendlela yokukhetha i-eyelashes efanelekileyo. Apha ngezantsi kukho intshayelelo eneenkcukacha kunye neengcebiso zesalathiso sakho. I-Kalocils Ubuhle ihlala inikezela ngeyona miba ilungileyo yobuxoki.
Amehlo eAlmond: Ubume bamehlo buphawulwa yikona yangaphandle engaphezulu. Abasetyhini abaninzi abanolu hlobo lwamehlo bafuna ukwandisa ubunzulu kunye nokuqina kwamehlo abo, ngoko ke zama i-eyeliner njengokutshayela ngesibindi kwisiciko esingasentla, imibala engathathi hlangothi emgceni phantsi kweliso, kunye neliner ephezulu kunye nezantsi kwimibala eyahlukeneyo. Ukunceda amehlo e-almond abonakale emakhulu, thintela i-liner kwicandelo elingaphandle lesiciko esingaphezulu. Ukwenza amehlo e-almond abonakale ejikeleze ngakumbi, yeka i-liner phambi kwekona elingaphandle leso, okanye usebenzise umthunzi okhanyayo okanye umsi otshisayo okanye otyhafileyo kuloo ndawo.
I-Kalocils 3D Series I-Lashes engeyonyani: isitayile se-ELLEN
Vala Amehlo Okuseta: Amehlo okuseta asondeleyo aya kusondela kwibhulorho yempumlo kwaye asondele komnye nomnye. Unokuba namehlo asondeleyo asondeleyo kuzo naziphi na iimilo esele sithethile ngazo okanye zinokudityaniswa kweemilo ezisetiweyo. Abantu abanamehlo okuseta ngokusondeleyo bahlala bebonwa njengabantu abanobuqili kunye nabanobuqili kwaye namehlo asondeleyo asecaleni kakhulu.
I-Kalocils 3D Series Imivumbo engeyonyani: Uhlobo lwe-DEMI
Amehlo anzulu: Amehlo asetwe nzulu athambekele ekubeni makhulu kwaye abeke nzulu kwisokethi kuninzi. Zime ngendlela enokwenza ukuba ithambo lasebunzi libonakale libalasele kwaye iziphelo zokuqhuma kwendalo zihlala zityisa umphezulu weenkophe. Amehlo asetyiweyo anzulu anokufuna ukugxininisa ukuze ukhethe ukuqhuma okuphakathi embindini, ukugoba nokuphuma, kude nasebusweni. Imivimbo eyedwa ikwasebenza ngokukuko kolu luhlobo lwamehlo njengoko ukwazi ukugxila embindini, ukufaka ngaphezulu ukuphakanyiswa okugobileyo.
I-Kalocils 25mm I-Lashes engeyonyani: Isitayile se-AVIVA
Amehlo atshitshisiweyo: Amehlo atshisiweyo ahlala esinda kwiimbombo ezingaphandle kwaye iikona zangaphandle ziyajingxela okanye ziwe phantsi ngelixa iikona zangaphakathi zinyuka. Imeko yamehlo etshintshileyo inkanuko yesini kwaye ibonakala inzima kwaye ishushu. Oku kukwabhekiswa njengamehlo okulala kwaye kuyimeko yamehlo amangalisayo. Amehlo atshintshiweyo ahlala emakhulu kwaye aziboleka ngokufanelekileyo kwisicelo sobunzima esinzima.
I-Kalocils 25mm I-Lashes engeyonyani: Uhlobo lwe-HELENA
Amehlo aHooded: Ukuba unamehlo afihliweyo, uya kuqaphela isongelo esisezantsi ngaphaya kwejwabu leso, ke xa iliso livulekile, ijwabu leso alibonakali kwaye liphinda libuyele kwakhona. Ukuqhuma okufanelekileyo kolu hlobo, njengamehlo asetelwe nzulu, kufuneka kube kukude kwaye kube nobude obungakumbi kwiziko. Imivimbo yeqela okanye abantu banokusebenza ngcono njengoko unokuzakha ngokwakho ukwenza inkangeleko oyifunayo. Musa ukoyika ukuqhushumba, lumka ungakhethi iseti enokuthi itsale isiciko, ibenze babonakale bancinci.
I-Kalocils 25mm I-Lashes engeyonyani: Uhlobo lwe-ALLISON
Amehlo e-Mono-lid: Amehlo ane-mono-lidded achazwa ethe tyaba phezu komhlaba kunye nokusilela kwindawo ecacileyo, ngamanye amaxesha ayinayo kwaphela. Amehlo e-Monolid athambekele ekubeni ne-eyelashes ethe tye kwaye inenkani, ke xa kuziwa ekukhetheni eyona mijelo ilungileyo, kungcono ukugxila kwilayiti enemilenze emininzi, njengoko inokwenza imimangaliso ekutsaleni ingqalelo efihlakeleyo kodwa engathandekiyo kwesi sibini. zobuhle.
I-Kalocils 25mm I-Lashes engeyonyani: Uhlobo lweZOEY
Amehlo aPhakamileyo / aPhambili: Isitayile se-lash esinendalo, esahlukileyo esifutshane ukuya kubude obuphakathi be-lash siya kubonelela ngokuqaqamba okufanelekileyo kodwa sizise amehlo akho. Kwiimeko zamehlo eziqaqambileyo okanye ezithandabuzekayo, ukwakheka kunokunceda ukunciphisa imbonakalo ukuba iyaqhuma, okanye ukuphuma. Ukwenza iliso libonakale ngokungathi lihlehla ngakumbi ebusweni, sebenzisa umthunzi omnyama wesithunzi samehlo kufutshane nomgca wokuqhushumba kunye nesiseko sesivalo. Sebenzisa umthunzi okhanyayo kancinci kwi-crease, kwaye udibanise ngaphandle ujonge kwithambo lobuso.
I-Kalocils 3D Mink Lashes: Isitayile seDONNA
Amehlo ajikelezayo: Ubume bamehlo buhlala bukhulu, kwaye bujongeka buvulekile kwaye uninzi lwabafazi bathanda ukusebenzisa izithambiso ukunyusa iliso. Sebenzisa i-liner emnyama ukunyusa kancinci ngaphaya kwejwabu leso kwiikona ezingaphandle ukunika le ngcamango. Sebenzisa umthunzi ophakathi kwesithunzi samehlo kwijwabu leso (ukuya kuthi ga kwindawo ekuhlalwa kuyo) kwaye wandise umthunzi kancinci ukuya phezulu kwithambo lobuso kunye nokuhla kancinci ukuya kwisivalo esisezantsi ukwenza ukubonakala kwamehlo okude.
I-Kalocils Magnetic Eyelashes: IMagnetic Lashes Kit
Izandiso zeEyelash, Abathengisi bee-Eyelash, Imivimbo ye-mink, Imivimbo yamehlo, I-liner yamehlo, eyeliner,